☺ ငြိမ်းဇေဦး : Jan 13, 2008
ပေါက်လွှတ်ပဲစား လွမ်းမိတဲ့ ကာလများ
တခါသုံး အပြုံးတွေနဲ့
`အတွေးရှုပ် ညရေးမလွယ် အသည်းလေးရယ်´
ပဉ္စလက် အတတ်တွေနဲ့
သန္ဓေသားတွေရဲ့ သင်္ချိုင်းဟာ
ငါကတော့ငယ်မွေးခြံပေါက် သောကတွေနဲ့
အတ္တ ဖာထေးမှု နဲ့ ပေါက်ပြဲခြင်းများ…..
စိတ်နာတယ်…။ ဖာသည်မတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ.....၊
ကျနော်သိချင်လာတယ်….၀မ်းလဲနည်းနေတယ်…၊ ဒီတော့…. ဖာသည်မတစ်ယောက်ကို မင်းလောင်းရှာတဲ့ဖုတ်သွင်းရထားလိုကျနော်ဟာရှာခဲ့တယ်…..။
ဖာသည်မကပြောတယ်ဆာတယ်တဲ့…ကျနော်က ဖာသည်မကို ကြည့်လိုက်တယ် စင်္ကြာဝဠာကြီးကိုတောင်မျိုချမယ့်မျက်နှာမျိုး နဲ့ ပြန်ကြည့်တယ်..ကျနော်က ဒါဆို ကျွေးမှာပေါ့လို့ပြောပြီး … ရင်သားကြီးကြီး ခပ်လှလှမိန်းမတွေ စားပွဲထိုးတဲ့ မီးရောင်မှိန်မှိန် ညကလပ်တစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်…။ သူ့အတွက်ကျောက်ပုဇွန်ထုတ်ကြီးတွေမှာလိုက်တယ်..။ ကျနော့်အတွက် ဆူနားမိထက်ပြင်းတဲ့အရက်..မှာလိုက်တယ်…။ သူစားတယ် ..ကျနော်သောက်တယ်.. စားပွဲထိုးမရဲ့ရင်သားတွေကြားကို ကျနော်ကြောင်တကောင်လိုခုန်ဝင်လိုက်တယ်…ဖာသည်မ ကတော့ ဖာသည်မ ဘ၀ကိုမေ့သွားတဲ့ အာရုံတွေ နဲ့ ကျက်သရေရှိရှိ စားနေရဲ့…။
စားပွဲထိုးမထွက်သွားတဲ့အခါ ကျနော်ဟာ စင်ပေါ်မှာ တကိုယ်လုံးချွတ်ကနေတဲ့ မိန်းမကိုငေးကြည့်နေတယ် ပြီးတော့ ကျနော့်ဘေးက ဒီည အတွက် ကျနော်ပိုင်တဲ့ ဖာသည်မ ရဲ့ပေါင်သာျးွှေကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်နေမိတယ်..ဖာသည်မ ဟာ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ယိုင်ကျလာတယ်..ကျနော်ဟာသူ့ ရင်သားအိအိတွေကို မထိတထိကိုင်ချင်နေရဲ့…။
သူစားသောက်ပြီးတဲ့အခါ ကျနော်ဟာ နောက်ထပ် အရက်တစ်ခွက်မှာရင်း သောက်နေတယ်…။ သူက သိပ်မူးသွားမယ်နော်လို့ သတိပေးတယ်..အမှန်တော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်သာ ကမ္ဘာကြီးဆိုရင် နေမင်းကို သုံးရာခြောက်ဆယ့်ငါးရက် မှာတပတ်မပတ်ပဲ ငါးမိနစ်အတွင်း တပတ်ချင်းပတ်ဖြစ်အောင်ကို ချာချာလည်နေပြီ…။
ဖာသည်မဟာ အခုအခါ ဖာသည်မ မဟုတ်တော့ဘူး….။ ပိုက်ဆံရှင်းပေးလိုက်တယ် စားသောက်သမျှ…. ကားရပ်ထားရာကွက်လပ်ကိုရောက်တော့ ကျနော်ဟာ ဖာသည်မကို ကားသော့ ပေးလိုက်တယ် ဖာသည်မဟာကျနော့်ကို တွဲပြီး ကားထဲမှာ ထိုင်နိုင်အောင် ကားတံခါးဖွင့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ထိုင်ခုံကိုသူ နဲ့ အနေတော်ဖြစ်အောင်ပြင်ပြီး သူမောင်းတယ်…. သူမဟာကားကို ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဆာကို ကွန်ဒုံစွပ်သလိုမောင်းခဲ့တယ်…။
ကျနော်ဟာ ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်..မဆီမဆိုင်ဖာသည်မက ကျနော့်ကိုမေးတယ် အချစ်ဦးကိုလူတွေ တကယ်လွမ်းကြသလားတဲ့ ….သိပ်ချစ်တဲ့သူကို တကယ်လွမ်းမိကြသလားတဲ့…။
ကျနော်က ရယ်လိုက်တယ်… ပြီးတော့ဖြေ လိုက်တယ်..ငါ့အချစ်ဦးကတော့ အင်မတန်စွမ်းအားကြီးတဲ့ ဆေးခြောက်ပဲလို့…သူမက မသက်မသာရယ်လိုက်တယ်…။ ကျနော် သူမ ကိုမေးလိုက်တယ်…ဆေးခြောက်ဝယ်လို့ရသလားလို့…ဖာသည်မက … ရတာပေါ့တဲ့…. ဒါနဲ့ကျနော်က ခုသွားဝယ်လို့ပြောလိုက်တယ်… သူမက တကယ်လားတဲ့…ကျနော်က ခပ်ဆတ်ဆတ်ဟောက်လိုက်တယ်..နင်လူစကား နား မလည်ဘူးလားလို့…. သူမဟာ မင်္ဂလာဦး ညကို တပါတ် လွန်မြောက်လာခဲ့ရတဲ့ ဟိန္ဒူ မယားတစ်ယောက်လို ညှိုးငယ်မှုတွေနဲ့ အင်းပါ ..
ဒါဆို သွားဝယ်လိုက်ပါ့မယ် ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ်….။
တအောင့်ကြာတော့ သူမဟာ ပလတ်စတစ်နဲ့ ထုတ်ထားတဲ့ဆေးခြောက်ထုတ်နဲ့ပြန်လာတယ်.. ကျနော်က ဟိုတယ် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအဆင်သင့် ထည့်ပေးထားတဲ့ ပန်းသီး တစ်လုံးကို ကျနော့် သော့တွဲက မောင်းချဓါးနဲ့ ဖောက်ယူခြစ်ထုတ် လိုက်တယ်.. ပြီးတော့ ကျနော့်ရဲ့ ရွှေ အစစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ဘောပင်ကို တပိုင်းစီဖြုတ်လိုက်တယ်… ပြီးတော့ ပန်းသီးရဲ့ နံရံ က ထိုးဖောက်ပစ်ပြီး ဆေးတံလိုလုပ်လိုက်တယ်…။
နောက်တော့ ..ဖာသည်မ တလှည့် ကျနော်တလှည့် ဆေးခြောက်တွေ ရှူကြတယ်… ပြီးတော့ ဖာသည်မက ကျနော့်ကို တာဝန်အရ ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ မေးလိုက်တယ်… ချစ်ချင်ပြီလားတဲ့…..။
ကျနော်ဟာ သူ့ မျက်နှာကိုစေ့စေ့ကြည့်ရင်း… ပြုံးပြမိတယ်.. သူက ခပ်လေးလေးနဲ့ သူ့ အ၀တ် တွေကို ချွတ်ချခဲ့တယ်..။ ကျနော်ဟာ သူ့ရင်သားတွေကို သုံ့ပန်းတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်မိတယ်…။
ပြီးတော့ကျနော်ဟာ လျှပ်စစ် ကုလားထိုင် မှာ သေဒဏ်ပေးခံရမှုကို မလွှဲမရှောင် သာပေမယ့် အားလုံးကိုမုန်းတီး နာကျည်းတဲ့ အကျဉ်းသား တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့ရင်း… ရုတ်တရက်..သူ့ ကိုပြောလိုက်တယ်… ကျနော့် မိခင်ဘာသာစကားနဲ့…“ချစ်လေးကွာ..ကိုကို့ကို စိတ်နာအောင် သိပ်လုပ်တယ်..” ပြီးတော့ ကျနော်ဟာ မျက်ရည်တွေနဲ့ အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦ တစ်ခုပေါ်မှာ ရွက်လွှင့်ခဲ့မိတယ်…။ ဖာသည်မဟာ ကျနော်နဲ့အတူစောင်ထဲမှာ… သူ့ကို ကျနော်ကဖက်လို့…လိင်မှုကိစ္စတွေဘာမှ မဖြစ်မြောက်ပဲ အိပ်ပျော်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။
ကျနော့် မူးယစ်အသိမဲ့ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျနော့်ချစ်သူကိုမြင်လာတယ် … ကျနော်က ကျနော့်ချစ်သူကို ဖာသည်မနဲ့ ကျနော် အိပ်စက်နေတာကို ခန်းဆီး လှစ်ပြခဲ့တယ်.. ပြီးတော့ ကျနော်ဟာ ကျနော့်ချစ်သူကို ပြုံးပြပြီး.. အခန်းတံခါးဖွင့်လို့ ၀ရန်တာဆီထွက်လာခဲ့တယ်…၀ရန်တာ လက်ရမ်းပေါ်တက်လမ်းလျှောက်လို့ ကားတစီးစ နှစ်စီးစ သွားနေကြသေးတဲ့ မြေပြင်လမ်းမကြီးနဲ့ ဟိုးခပ်ဝေးဝေးက မြစ်ပြင်ကိုကြည့်ရင်း….။
တစုံတယောက်ဟာ ကျနော့်ကို နောက်ကျောက တင်းတင်းကျပ်ကျပ်လှမ်းဖက်လိုက်တယ်….ကျနော် ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ဆွဲအားကို လွန်ဆန်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်…။ ကျနော်လန့် နိုးလာတယ်…ကျနော့်ကျောကုန်းမှာ..ရင်သားအိအိရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ပေါ့….။